पहिलो संबिधानसभाको सभासद स्व छिमाया राईको प्रथम स्‍मृति दिवस सम्पन्न – KhabarTime
पहिलो संबिधानसभाको सभासद स्व छिमाया राईको प्रथम स्‍मृति दिवस सम्पन्न
धरान । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका पहिलो संविधानसभा सभाषद् छियामा राईको प्रथम स्मृतिमा पार्टीले धरान–८ स्थित पार्टी कार्यालयमा निर्मित छियामाको अर्धकदको प्रतिमामा माल्यापर्ण गर्दै बुधबार स्मरण गरेको हो । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले प्रतिमामा फूलमालाले माल्यापर्ण गर्नु भएको थियो । छियामा २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको समानुपातिक सभाषद् हुन् । उनी २०७६ भदौं १० गते काठमाडौं अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएकी थिइन् ।
पार्टी स्थापना कालदेखि नै उनी सक्रिय रूपमा संगठन विस्तारमा आग्रहणी भूमिका निभाउदै उनी पार्टीकी संघीय महासभा सदस्य रहेकी थिइन् । पार्टी २०४८ माघ ६ गते स्थापना भएको थियो । त्यसयता धरानबाट आवद्ध भएर सक्रिय भुमिका खेलेको पार्टी अध्यक्ष पालुङ्वाले बताए । पार्टीलाई धरान–८ सिद्धार्थमार्गमा करिब १ करोड मूल्य बराबरको जग्गा उपलब्ध गराएकी थिइन् ।
धरान–८ सिद्धार्थ मार्गमा रहेको सो पार्टीको सुनसरी जिल्ला कार्यलय पार्टी भवनमा बोल्दै पालुङवाले पार्टी स्थापनादेखि नै राईले अविचलित रही महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका राइलाई स्मरण अध्यक्ष पालुङ्वा निकै भाबुक भएका थिए । पार्टी जिबनको आरोह अबरोहमा निकै नै संघर्स गर्दै आईरहेका छौ । नेपालको राजनीति ईतिहासमा नै पार्टीले पूर्वगोर्खाजका जाहान (परिवार) लाई पहिलो संबिधान-सभाको सभासद बनाउने पहिलो पार्टीको रुपमा राईलाइ उपस्थिती गराउन सकेको क्षण स्मरण गर्दै आफु निकै हर्सित भएको खुशी पनि पालुङवाले बाडेका थिए । मुलुक परिवर्तन गर्नको निम्ती आग्रहजहरुले देखाएको मार्ग सही र सत्य रहेको सो अबसरमा बताउदै अब जनमुक्ति बिचार-धारा नै मुलुकको बिकल्प रहेको बताए ।
स्व छिमाया राई लाई स्मरण गर्दै पार्टीका संघीय परिषद सचिव विष्णु थाम्देनले राईको संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पहिलो पटक संघीय व्यवस्थाको प्रस्थावना गर्ने आफ्नो पार्टी रहेको बताए । उनले जसरी संसारमा कार्लमाक्स कम्युनिष्ट घोषणा पत्र दिए त्यसरी नै जनमुक्ति पार्टीले पनि संघीय व्यवस्थाको प्रस्थावना ल्याएको बताए ।
पहिलो संविधानसभा सभासद स्व. छियामा राई
संक्षिप्त जीवनी वि.सं. १९९८ मंसिर ११ मा भोजपुर जिल्लाको ठूलो दुम्मा गा.वि.स. ६ मा जन्म भई प्रारम्भिक चरणको शिक्षा भोजपुर जिल्लामै पुरा गरी उहाँको परिवार धरान बसाई सरेको हो । मेजर बाघधन राईसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उहाँ धरान-८ भोटेपुलमा स्थायी बसोबास गर्न थाल्नु भयो । उहाँले परिवारका साथ बेलायत लगायत अन्य राष्ट्रहरु पनि भ्रमण गर्नुभएको छ । औपचारिक शिक्षा प्रारम्भिक स्तरको मात्र लिए पनि सामाजिक र शैक्षिक रुपमा उहाँको ठूलो योगदान छ । उहाँले दुङमाली भाषा उत्थानको लागि आर्थिक रुपमा ठूलो लगानी गर्नु भएको कारण दुङमाली समाजको उहाँप्रति उच्च सम्मान छ।
राजनीतिक रुपले उहाँको यात्रा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट शुरु भएको थियो । २०४८ साल माघ ०६ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थापना भएपछि देशभर संगठन विस्तार तथा आमसभाहरु आयोजना गरिए । सोही समयमा उहाँले धरानबाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा आबद्ध भई सक्रिय भुमिका खेल्नु भयो । तत्कालिन समयमा धरान राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको शक्ति केन्द्र थियो । यो सवालमा स्वर्गिय मा. छियामा राईको अत्यन्तै ठूलो योगदान थियो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी धरान-८ वडा स्तरमा उहाँले केही समय योगदान दिएपछि पार्टीको नगर समितिमा रहेर काम गर्नुभयो । २०५१ सालको संसदीय (मध्यावधि) निर्वाचनपछि उहाँले केही समय निर्वाचन क्षेत्रिय समितिमा रहेर काम गर्नुभयो । २०५७ सालको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको चौथो जिल्ला अधिवेशनले उहाँलाई जिल्ला सल्लाहकार चयन गयो । तत्कालिन अवस्थामा देशको राजनीति उथलपुथल अवस्थामा थियो । धेरै कार्यकर्ताहरु पार्टीबाट पलायन भए तर पनि उहाँ पार्टीमा अडिग रहनु भयो ।
२०६४ सालको ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उहाँलाई पार्टीले समानुपातिक तर्फबाट सभासद बनायो । २०६७ सालमा सम्पन्न पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले उहाँलाई पार्टीको संघीय परिषद् सदस्य पदमा निर्वाचित गर्यो । पार्टीमा अविचलित रुपमा उहाँ रहन भयो र संविधान सभा सभासदको पाँच वर्षे कार्यकाल सकशल पुरा गर्नुभयो । २०७३ सालमा सम्पन्न पार्टीको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले उहाँलाई पार्टीको संघीय महासभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्यो।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापना कालदेखि नै उहाँ पार्टीको अर्थ दाताको रुपमा रहनु भएको थियो । धरान-८ सिद्धार्थ मार्गमा उहाँले लगभग (वर्तमान मूल्य) एक करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ । हाल उक्त जग्गामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सुनसरी जिल्ला समितिको जिल्ला कार्यालय रहेको छ।
राष्ट्रिय जनमक्ति पार्टीको संघीय महासभा सदस्यको रुपमा क्रियाशिल रहेकै अवस्थामा वि.स. २०७६ साल भदौ १० गते सुमेरु अस्पताल काठमाडौमा उहाँको देहावसान भयो।
विष्णु थाम्देन, संघीय परिषद् सचिव, राजमुपा
कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा स्व छिमाया राईको प्रथम वार्षिक स्‍मृति भब्यरुपमा मनाउन नसकेता पनि निकै अर्थपूर्ण ढंङ बाट मनाईेको जनमुक्ति पार्टी धरान उपमहानगर संयोजक चित्रहाङ मगरले बताए । मगरले कोरोनाको लक्षण नै विना मानिसहरुको सरकारले पि.सि.आर टेष्ट गराएर राज्यले भ्रष्ट्रचार गरेको दाबी गरेका छन । भ्रष्ट्रचारीले अहिले उन्मुक्ती पाए पनि एक दिन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले छानबिन गर्छ गर्छ । त्यसको निम्ती जनतालाई सचेत र जागरुक गर्न पार्टीले भ्रष्ट्रचार बिरुद्ध राष्ट्रिय अभियान निरन्तर चलाइरहेको समेत बताएका छन् ।
Tags: छिमाया राईप्रतिमाफूलमालासभासदस्मृति दिवस
नेपाल आइडल सिजन ३ को बिजेता बनिन् पहिलो नेपाली चेली सज्जा चौलागाईं